Abavelisi beeChiller zamanzi - iTshayina yaManzi aBathengisi kunye neFektri
Umchiza waManzi oQinisekisiweyo
Yasekwa ngonyaka ka-2000, ngaphezu kweminyaka engama-20 yamava ekuveliseni chiller amanzi. I-chiller yethu yamanzi yinxalenye yenkqubo yokupholisa ikhonkrithi enokusetyenziswa phantsi kweemeko zomsebenzi ezinzima ukuvelisa amanzi apholileyo okusetyenziselwa imveliso.
Imodeli yokubalulwa kwemveliso igqityiwe ukuzalisekisa iinkalo zesicelo ezichaseneyo.
Uyilo lweemodyuli, qinisekisa ukuba amanzi aqanda amanzi asebenza ngokukuko kunye nokusetyenziswa kwamandla okuphantsi.
Uhlobo lweShell kunye neTyhubhu yoLungiso lwaManzi
I-Shell kunye neTyhubhu yohlobo lweChiller yaManzi ikwindawo efanelekileyo yokupholisa izixhobo zeshishini kunye nemeko yomoya ophakathi. Iimveliso zethu zisebenzisa iqokobhe eligudileyo kunye netyhubhu evaporator kunye nokusebenza okuphezulu kokutshisa ubushushu ityhubhu, enikezela ukutshisa okuphezulu kunye nokususwa okulula. Uhlobo lweShell kunye neTyhubhu yamanzi aChiller asetyenziswa kakhulu kwinkqubo yefriji yeammonia kunye nenkqubo yefriji yeFreon.
Uhlobo lwefilimu yohlobo lwamanzi oluwisayo luqesha iipleyiti eziwayo ezinamanzi ezikwaziyo ukubonelela ngobushushu obuphezulu kunye nokuvelisa amanzi omkhenkce kufutshane ne0.℃. Ngeli xesha, kukho indawo eyoneleyo kwicala lamanzi lomphunga ukuze kungabikho ngumkhenkce.